Bhalisa via RSS
Phase I: 15th Gumiguru ---- 19th Oct., 2017
Mishonga: magetsi, magetsi, ironware uye zvinhu zvokuvaka
Phase II: 23rd Gumiguru ---- 27th Oct., 2017
Chigadzirwa: zvinhu, zvipo uye kugadzira musha
Mutengo: zvishandiso, zvipfeko, shangu, mahofisi emahofisi, mishonga uye zvokudya
Nhauriro: Kwete. 380 Yuejiang Middle Road, China Import & Export Commodities Exhibition Hall
Tichapinda chikamu chechitatu; Ngatitarisei kurongwa kwedu.
Kana iwe uchizoendawo kune zvakakosha, ingotibhadharira kushanyira nokuti ihwo rukudzo rukuru kwatiri. Anotarisira kusangana neshamwari dzose muChinzhou.
in	Uncategorized kuratidza
I121th Canton Fair ichaitwa nokukurumidza muChinzhou, China. Iyo yakanaka ichabatanidzwa muzvikamu zvitatu, zvakataurwa pasi apa:
Cherechedza: Mhemberero dzeMutambo Wemwaka
Tinoda kuzivisa kuti kune 2017 Spring Festival Holidays, tichazotora kubva muna Jan. 27th kusvika Feb. 2nd uye tichadzoka kushanda musi waFebruary 3rd (Chishanu), 2017. Kuti tigadzirise zvinhu zvinokurumidza, tichava mubasa musi waJan. 22nd (Svondo) uye Feb. 4th (Mugovera) 2017. Ndine urombo nokuda kwekukanganisa kupi zvako kwakaitika uye kuvonga zvakawanda nokuda kwekutsigirwa kwako uye kunzwisisa. Tiri kutarisira kushandira pamwe newe zvakanyanya pedyo neNyika Idzva. Gore Idzva Inofara uye anokuda iwe kubudirira mugore rinouya.
Nguva Yezororo: Jan. 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, Feb. 1st, 2nd
Tichakurukura newe chero bedzi tichizodzokera kushanda!
I120th Canton Fair ichaitwa nokukurumidza muChinzhou, China. Iyo yakanaka ichabatanidzwa muzvikamu zvitatu, zvakataurwa pasi apa:
Phase I: 15th Gumiguru ---- 19th Oct., 2016
Phase II: 23rd Gumiguru ---- 27th Oct., 2016
Tichapinda chikamu chechipiri nechechitatu; Ngatitarisei kurongwa kwedu.
MH App iri paIndaneti ikozvino, yakagadzirira kushandisa nekubatanidza MH club club!
l Chii chiri MH APP?
Kurumidza kutsvaga michina uye uwane zvakananga zvinyorwa.
Tsvaga zvinyorwa zveMH uye uwane ruzivo rwekutsvaga.
Tsvaga bazi rekaseti yekutarisana ne-face-face service.
l Nzira yekuwana sei gwaro rakavimbika paMH App nokukurumidza?
Ndapota nyora zita romutengesi wako paunonyora.
Iwe unogonawo kukodha iyo App kubva kuGoogle Play kana App Store zvakananga. Tsvaga kutsvaga "NINGBO MH"App
Cherechedzai: Mutambo weBato reGungwa
Nokuda kwekuuya kweMutambo wechikepe cheGungwa, isu tichavharwa pa 9th June (China) 2016 uye achadzoka kuzoshanda pa 10th June (Chishanu), 2016. Ndine urombo nokuda kwekukanganisa kupi zvako kwakaitika uye kuvonga zvakawanda nokuda kwekunzwisisa kwako nekusigirwa. Tichabata zvinhu chero bedzi tichidzoka. Ndokutenda zvikuru!
MH Musangano weMitambo
Munguva pfupi yapfuura takaziva kuti mumwe munhu ari kuita Ningbo MH Industry Co., Ltd. mune Facebook uye achibvumira vatengi vedu mari yakawanda. Pano tinoyeuchidza nomutsa kuti usati waita kubhadhara, tapota tarisai nesu nokuda kwebhuku rebhangi.
Kana uchiri nekusava nechokwadi, usazeza kutitumira ne email kana foni:
Nhare yedu yepaIndaneti iri: https://www.facebook.com/NingbomhOfficial/
The 119th Canton Fair ichaitwa nokukurumidza muChinzhou, China. Iyo yakanaka ichabatanidzwa muzvikamu zvitatu, zvakataurwa pasi apa:
Tinoda kuzivisa kuti kana iri ye 2016 Spring Festival Holidays, tichazotora kubva paFebruary 7th kusvika Feb. 13th uye tichadzoka kuzoshanda munaFebruary 14th (Svondo), 2016. Kuti tibate zvinhu zvinokurumidza, tichazoshanda musi waFebruary 6th (Mugovera) 2016. Ndine urombo nokuda kwekukanganisa kupi zvako kwakaitika uye kuvonga zvakawanda nokuda kwekutsigirwa kwako uye kunzwisisa. Tiri kutarisira kushandira pamwe newe zvakanyanya pedyo neNyika Idzva. Gore Idzva Inofara uye anokuda iwe kubudirira mugore rinouya. Nguva Yezororo: Feb. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th Tichakurukura newe chero bedzi tichidzoka kushanda!
Goredzva rakanaka! Nokuda kwegore idzva rinouya, tichava nehotera rimwe zuva musi wa 1st Jan. 2016 (Chishanu). Tariro yekukushumira iwe zviri nani mugore idzva.
Kuunganidza mazita emakambani anobatsira eMH industry
Tipei zvaunofunga uye iwe uchava nemukana wekuwana iPhone 6 ne10000RMB
Kutaurirana nekambani yeruzivo - kusika umambo hwekugadzirira zvinhu
Izvo tsika kana zvinoreva zvinofanira kunge zvakakosha kune bhizinesi nzvimbo uye inogadzirisa unhu hwemabhizimisi, akadai se:
shoko rakakomberedzwa rejasi zvinhu
shoko rakawandisa remutambo uye zvigadzirwa
shoko rakakomberedzwa rekusona uye zip
Mazita anofanira kunge ari munyika dzakawanda (yakashandurwa kubva kuChirungu kusvika kuChina), yakajeka, iri nyore kusiyanisa nekuyeuka
Mazita anofanira kubvumirana nemitemo yemitauro yeChirungu; mazita echiChinese anofanira kunge ari mukati ma 4 nhamba uye anotora
Mazita anofanirwa kunge aripo pamwe chete neChinese neChirungu chinokosha zvinoreva
Taurirana: kutumira zvido zvako, zita uye nhamba yefoni ku
Mumwe mubayiro wokutanga mubayiro (mubayiro wakakodzera 10000RMB): mazita ekupedzisira akagamuchirwa uye anoshandiswa
Muviri wechipiri muhope anokunda: iPhone 6 imwe neimwe
Dare rekuongorora (rakaumbwa nevatungamiri nevamiriri vevashandi veDhipatimendi reMabhizimisi reDzimwe reDhipatimendi reDhipatimendi reInternet Investment) richakurukura nekusarudza vatori vekutanga uye wechipiri mushure mushure mekushanda kwe5 mazuva ekuunganidza. Kana pasina rimwe remazita rakagamuchirwa, ipapo mubayiro wechipiri mutsara wechipiri uye unowedzera kubva kunzanga dzevanhu
Zvose mazita aya anofanira kunge aripo. MH ane kodzero uye anoshandisa zvakanaka uye Anochengeta kodzero yekududzirwa kwekupedzisira.
Cherechedza: Qingming Festival
Nokuda kwekuuya kweQingming Festival, tichavharwa musi waApril 6th (Muvhuro) 2015. Qingming ndiro zuva rinokosha kwazvo rekupira, uye tinobayira zvibayiro kumadzitateguru edu uye takafa uye tinotsvaira makuva avo kuti tiratidze ruremekedzo rwedu nekuyeuchidza kwavari. Tine urombo nokuda kwekukanganisa kupi kwakakonzerwa. Tichadzoka kuzoshanda pa 7th, April (Chipiri) 2015. Ndinokutendai nokuda kwekunzwisisa kwenyu uye tichakurukura newe pakarepo patinodzoka.
The 117th Canton Fair ichaitwa nokukurumidza muChinzhou, China. Iyo yakanaka ichabatanidzwa muzvikamu zvitatu, zvakataurwa pasi apa:
Phase I: 15th Mbudzi. ---- 19th Apr., 2015
Phase II: 23rd Mbudzi. ---- 27th Apr., 2015
Tinoda kuzivisa kuti kune 2015 Mhemberero dzeMutambo weChirungu, tichatora nguva Feb. 18th to Feb. 25th uye achadzoka kuzoshanda Feb. 26th (China), 2015. Kuti tigadzirise zvinhu zvinokurumidza, isu tichabva pabasa pana Feb. 15th (Svondo) uye Feb. 28th (Mugovera), 2015. Ndine urombo nokuda kwekukanganisa kupi zvako kwakaitika uye kuvonga zvakawanda nokuda kwekutsigirwa kwako uye kunzwisisa. Tiri kutarisira kushandira pamwe newe zvakanyanya pedyo neNyika Idzva. Gore Idzva Inofara uye anokuda iwe kubudirira mugore rinouya.
2015 Zuva Idzva reSvondo Zuva
Nokuda kwekuuya kwe2015, tichavharwa musi waJanuary 1st 2015 (China) uye tichadzoka kuzoshanda musi wa XNUMndinderi 2 (Chishanu). Ndine urombo nokuda kwekukanganisa kupi zvako kwakaitika uye kuvonga zvakawanda nokuda kwekunzwisisa kwako nekusigirwa. Ndinokuda iwe kubudirira uye neropafadzo muNyika Itsva iri kuuya. Tichabata zvinhu chero bedzi tichidzoka. Ndokutenda zvikuru!
Munguva pfupi yapfuura, vamwe vatengi vakagamuchira tsamba dzekubiridzira dzine kero imwechete ye email seyedu (zvakadai, uye kukumbira vatengi kuti vabhadhare kubhengi yakashata yebhangi, yekubiridzira mari).
Ndapota cherechedzai: ruzivo rwebhangi redu ruchengeta zvakafanana pasina chero shanduko (iyo inobhadhara zita rimwechete uye nhamba yekambani), kana ukawana email nebhazi ruzivo ruchichinja kana kuchinjwa kubva kune ani zvake pasi pezita rekambani yedu, kazhinji hazvisi pamutemo kana kuti hauna chokwadi, tapota taura nesu foni kana fax kuti uone kaviri kutenderera kwayo.
Pano tinonyora mazita ese e-mail akashandiswa neMH Company, ndapota nyatsoongorora paunogamuchira maimeri kunyanya email iripo:
Mukuwedzera, tinokurudzira kuti uchengetedze yepawedi password nekunyatsoronga nguva nenguva, kuti urege kubiridzira achibira bhizimisi redu rebhizimisi uye kutumira maunyore emaimeri muzita reMH.
The 116th Canton Fair ichaitwa nokukurumidza muChinzhou, China. Iyo yakanaka ichabatanidzwa muzvikamu zvitatu, zvakataurwa pasi apa:
Maonero angu paMH - Kubva kune vashandi vomunharaunda yeMH Lagos Branch, Nigeria
Zita rangu ndiNdubuisi Glory Amaka, mumiririri wehutano hwevatengi pasi pekutarisira kwaMambo Robbin Wu muDhipatimendi rekugadzirisa zvinhu munyika yose kuMH Industry Company. Ndakabatana neMH industry in 2013.
Nenguva yangu pano muMH mishonga yakange yakave yakanaka uye zvishoma kudzvinyirira mubasa rangu rebasa. MH Indasitiri Lagos ikambani iyo munhu wose anoda kushanda neshamwari dzake dzepedyo dzeChina. Vanogara vachiisa kuseka pavanenge vachitaurirana nevashandi pamwe chete nevatengi vavo, uye vachitaura mamwe mazwi mumitauro yedu yerimwe se "kilode", "baba", "dada ni". Tinodawo kutaurirana navo mumutauro wechiChinese se "ni hao". Vashandi veMH Nigeria vane vanhu vakanaka. Tinobatsirana uye tinobatsirana kuti tive nehupamhi hwepamusoro uye zvinofadza.
Ihutungamiri nehutungamiri zvave zvichitsigira, pasinei nekudhura kwezvinhu zvakanyanya munyika. Vashandi vanoisa zvakanakisisa mukusimbisa sangano. NH yakaisa mararamiro muhupenyu hwevagari veNigeria, iyo inofanana chaizvo nechitinhiro chedu chekuti "nokuda kwehupenyu hwako hwakanaka".
MH Lagos ane dhipatimendi yakasiyana-siyana, yakadai sedanda, wax, headtie, kugadzirisa zvinhu uye dhipatimendi renyika yose. Tine mushumiri anoungana musangano wekutanga wekutanga weChina. Mazvitoro ezakatengesa zvakanakisisa uye vashandi vakanakisisa mumatare akasiyana-siyana vachazove nemubairo wemari, iyo inobatsira zvikuru kukurudzira vashandi vose kuti vave vakashanda uye vanobudirira mubasa ravo.
Vashandi veMH vehurumende yehurumende vanoenda kune dzimwe nyika muNigeria kunotsvaga misika yavo. Tiri kuedza kuvhara Nigeria yose neMH brand of goods. Takazadzisa chinangwa chekutonga magedhi ekumadokero eNigeria nekuisa moyo yedu nemweya mubasa redu. Iye zvino ndinozvirumbidza kutaura kuti takaita kuti basa redu riite.
mutambo canton fair chivara rhino receka embroidery thread
sheli Hunokosha Notice
Ndinoda chigadzirwa chako
Ungada here kutumira email ku wazviita
Manheru akanaka, iyo yakanga iri mavara anoratidza mavara. Zita rangu ndiJoseine kubva kuUganda, Africa. Ndingade...
mh MH Kushongedza Mutambo uye Tape Magazini
Hi Flora, Ndinokutendai nokuda kwekufarira kwenyu mune zvigadzirwa zvedu. Ndinofunga kuti unogona kutaurirana nemapazi edu muIno ...
Flora MH Kushongedza Mutambo uye Tape Magazini
Hi, ini ndiri imba yekuchengetedza dzimba kubva kuIndia. Iwe une zvinhu zvakasiyana-siyana zvakanaka zvekushamba michina. Is it po ...
Blog musha Categories --Threads --Zizi --Ribbon & Tape --Ropa --Vanhu - Buttons --Interlining - Tassel & Fringe / Kuchengeta - Kubatsira Zvinhu --Garments & Accessories --Sewing Machine & Parts --Fabric - Vamwe Nezvedu --MH Overview --MH Industrial --MH History - Tara Shows --Vatariri vedu --Image Galleries --Video Album Taura nesu --Inzvimbo nzvimbo --Feedback Community --Blog --App --Join Us